Golaha Shacabka oo Akhrinta koowaad mariyay Hindise Sharciyeedka Ladagaallanka Argagixisada – Radio Muqdisho
Ugu horeyn Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa hambalyo u diray shacabka Somaliland doorashadii sida nabad gelyada leh kusoo gaba gaboowday ee dhawaan halkaasi ka dhacday, isagoo ku tilmaamay tallaabo horumar laga gaaray xagga demoqraadiyadda.
Guddiyada Maaliyada ee Golaha shacabka ayaa golaha ka hor jeediyay dib u eegista ku saabsan canshuurta gunnooyinka ee ku noqoshada Misaaniyadda Qaranka ee 2017-ka oo uu goluhu cod geliyay, waxaana guddiga uu soo jeediyay qodobo ay ka mid yihiin in guno xileedyada la siiyo mas’uuliyiinta dowladda laga jaro 8% canshuur bileed ah laga bilaabo bisha October ee Sanadkan, in xukumaddu ay diyaariso xeer nidaamiya oo qeexaya guno xileedyda Baarlamaanka Federaalka si waafaqsan xeer hoosaadka Golaha Shacabka, kaasi oo dhaqan galaya sanad miisaaniyadeedka 2018 intaasi ka dibna golaha ayaa cod geliyay, waxaana ogolaatay 149 mudane saddex ayaa ka aamustay mana jirin cid diiday.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ku dhawaaqay natiijada codeynta ayaa sidoo kale sheegay inaanu waxba ka jirin warar been abuur oo uu sheegay in maalmihii lasooa dhaafay baraha bulshada lagu daabacayay.
Intaasi kaddib Golaha Shacabka ayaa guda galay Akhrinta koowaad ee Hindise Sharciyeedka ladagaalanka argagixisada iyo ujeedooyinka uu xambaarsanyahay, wxaana golaha ka hor akhiryay Wasiirka Amniga oo sheegay in sharcigan uu la jaan qaadayo xeerarka caalamiga ah.
Sidoo kale Wasiirka Amniga ayaa golaha ka hor akhriyay Hindise Sharciyeedka xakameynta hubka wax dila oo ay Wasaaraddu soo diyaarisay.
Intaasi kaddib Xildhibaanada Gaolaha Shacabka ayaa dhowr su’aalood ku saabsan waxayaabaha sharciyadan ay soo kordhin doonaan iyo saameynta dhaqaale ee ay yeelan doonaan weydiiyay Wasiirka Amnaiga.
Ugu dambeyn Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa loo qeybiyay xisaab celinta gargaarga deg dega gaarka ah ee Xildhibaanada oo uu Golaha ka hor jeediyay Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Guddoomiyaha Golaha shacabka oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maalinka Sabtiga ah Golaha Shacabka uu yeelan doono kulan aan caadi aheyn oo uu qudbad ka jeedin doonoa Guddoomayaha Baarlamaanka ee Walaalaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo dalka booqasho casuumaad rasmi ah ku imaan doona.